ယနခေ့တျေ အမြိုးသမီးလေးမြား မှတျသားလိုကျနာသငျ့တဲ့ မိနျးမမွတျအင်ျဂါ ၉ ပါး – Nyi Ma Lay
ယနခေ့တျေ အမြိုးသမီးလေးမြား မှတျသားလိုကျနာသငျ့တဲ့ မိနျးမမွတျအင်ျဂါ ၉ ပါး
မိနျးကလေး မြား မှတျသားလို ကျနာသငျ့တဲ့ မိနျးမမွတျ အင်ျဂါ (၉) ပါး
လောကကွီးမှာ အကော ငျးအဆိုး ၊ အကွောငျး အကြိုးကို ခှဲခွား သိမွငျနိုငျတဲ့ စှမျးအငျကို ပိုငျဆိုငျတဲ့လူဆိုတာ ရှားပါတယျ။ မိနျးမတှေ မှိုလိုပေါ တဲ့ လောကကွီး မှာလညျး မိနျးမမွတျဆိုတာ ရှလေို ရှားပါးလှနျးပါတယျ။
ဘယျလို မိနျးမမြိုးကို မိနျးမမွတျလို့ ချေါတာလဲဆိုတာ ခှဲခွားသိမွငျ နိုငျဖို့ မိနျးမွ မတျအင်ျဂါ (၉)ပါးကို ဖျောပွလိုကျပါတယျ။
၁။ ကိုယျ့အား ကိုယျကိုးတတျတယျ
မိနျးမမွတျ ဆိုတာ ကိုယျ့ဘဝကို ကိုယျတိုငျအကော ငျအထညျဖျောပွီး အိ ပျမကျတှကေို အမိအရဆုပျကိုငျတတျသူမြား ဖွဈပါတယျ။.
မိနျးမမွ တျဆိုတာ လောက ဓံရှဈပါးကို ကွံ့ကွံ့ခံပွီး ဘဝပငျလယျ ထဲမှာ အားမလြော့ဘဲ ဆကျလှျောနသေူမြာွး ဖဈပါတယျ။ ကိုယျ့ခံစားခကျြကို အမြားသူငှာသိအောငျ ပေါကျကှဲေ နမယျ့အစား မိမိကိုယျကို ဖွသေိမျ့နိုငျသူမြားဖွဈပါတယျ။
မိနျးမအ မြားစုဟာ အတငျးပွောေ လ့ရှိကွပမေယျ့ မိနျးမမွတျတှေ ကတော့ အတငျးမပွောပါဘူး။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ သူတဈပါးမကောငျးကွောငျး အတငျးပွောတယျ ဆိုတာဟာ အခြိနျဖွုနျးခွငျး တဈမြိုးလို့ ခံယူထားတဲ့ အတှကျ ဖွဈပါတယျ။
ဆနျ့ကငျြဘကျ လိငျတှကေ ကိုယျ့ကို စိတျဝငျစားတာကို မိနျးမအမြားစုခံခငျြကွပမေယျ့ မိနျးမမွတျတှေ ကတော့ ဘဝကို ရိုးရှငျးစှာ ဖွတျသနျးလိုကွပါတယျ။ သူတဈပါး စိတျဝငျစားအောငျ တမငျလုပျကိုငျခွငျး ၊ အမူအရာပွခွငျးတှေ လုံးဝမလုပျကွပါဘူး။
၅။ အိမျထောငျဖကျ အပျေါမှာလညျး သစ်စာရှိတယျ။
ဖောကျပွနျတတျတဲ့ မိနျးမတှေ အမြားကွီးရှိပမေယျ့ မိနျးမမွတျတှကေတော့ ကိုယျ့ခဈြသူ ၊ ကိုယျ့ခငျပှနျးအတှကျ ရိုးမွကေပြေါငျးသငျးရအောငျ အမွဲတမျးသစ်စာစောငျ့သိကွသူမြားဖွဈပါတယျ။ ကိုယျ့ကွငျဖျော တဈယောကျတညျးကိုသာ စှဲစှဲမွဲမွဲခဈြပွီး သစ်စာခိုငျမွဲရှလေ ကျတှဲလိုကွပါတယျ။
မိနျးမမွတျတှဆေိုတာ ကိုယျပိုငျဝါသနာကို လကျတှကွေ့အောငျ အကော ငျအထညျဖျောတတျကွပွီး ကိုယျ့ဒဿနနှငျ့ ကိုယျတိုငျအသကျမှေးကွသူမြားဖွဈပါတယျ။ လောကကွီးအတှကျ ရိုးရှငျးစှာဖွတျသနျးကွပွီး ဆနျးပွားစှာ တှေးချေါကွ သူမြားဖွဈပါတယျ။
အသိတရားမွ ငျ့မားတယျဆိုတာ ဘာသာရပျတဈ ခုကို အလှယျတကူ တတျမွောကျနိုငျတဲ့ အစှမျးသတ်တိဖွဈတဲ့ ဉာဏျကောငျးခွငျးကို ဆိုလိုတာမဟုတျပါဘူး။ မိနျးမမွတျဆိုတာ အကွောငျးအ ကြိုး ၊ အကောငျး အဆိုးကို ပွတျပွတျသားသား ဆုံးဖွတျနိုငျတဲ့ အသိတရားမြိုး ပိုငျဆိုငျထားကွပါတယျ။
ပွုံးရှငျနတေဲ့ မကျြနှာထားဟာ မွငျရသူ အပေါငျးကို စိတျကွညျနူးစပေါတယျ။ မိနျးမမွတျတှဟော သူတို့ရဲ့မကျြနှာအနအေ ထားဟာလညျးကွညျလ ငျခြိုသာပါတယျ။ စူပုတျနတေဲ့ မကျြနှာထားကို ဘယျတော့မှ ဖျောပွလမေ့ရှိဘဲ အမွဲတမျးပွုံးရှငျေ နလရှေိ့ပါတယျ။
မိနျးမမွတျေ တှဆိုတာ လူတိုငျးနှငျ့အလိုကျ သငျ့ ပေါငျးသငျးတတျပါတယျ။ လူမုနျးမမြားစဘေဲ လူတိုငျးနှငျ့တညျ့အောငျ ပေါငျးသငျးတတျတဲ့ အသိတရားလညျး လကျကိုငျထား တဲ့အတှကျဆကျ ဆံရေးပါရဂူမြားဖွဈွ ပနျပါတယျ။
မိန်းကလေး များ မှတ်သားလို က်နာသင့်တဲ့ မိန်းမမြတ် အင်္ဂါ (၉) ပါး
လောကကြီးမှာ အကော င်းအဆိုး ၊ အကြောင်း အကျိုးကို ခွဲခြား သိမြင်နိုင်တဲ့ စွမ်းအင်ကို ပိုင်ဆိုင်တဲ့လူဆိုတာ ရှားပါတယ်။ မိန်းမတွေ မှိုလိုပေါ တဲ့ လောကကြီး မှာလည်း မိန်းမမြတ်ဆိုတာ ရွှေလို ရှားပါးလွန်းပါတယ်။
ဘယ်လို မိန်းမမျိုးကို မိန်းမမြတ်လို့ ခေါ်တာလဲဆိုတာ ခွဲခြားသိမြင် နိုင်ဖို့ မိန်းမြ မတ်အင်္ဂါ (၉)ပါးကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
၁။ ကိုယ့်အား ကိုယ်ကိုးတတ်တယ်
မိန်းမမြတ် ဆိုတာ ကိုယ့်ဘဝကို ကိုယ်တိုင်အကော င်အထည်ဖော်ပြီး အိ ပ်မက်တွေကို အမိအရဆုပ်ကိုင်တတ်သူများ ဖြစ်ပါတယ်။.
၂။ စိတ်ခံစားမှုကို ထိန်းချုပ်နိုင်တယ်
မိန်းမမြ တ်ဆိုတာ လောက ဓံရှစ်ပါးကို ကြံ့ကြံ့ခံပြီး ဘဝပင်လယ် ထဲမှာ အားမလျော့ဘဲ ဆက်လှော်နေသူမျာြး ဖစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ခံစားချက်ကို အများသူငှာသိအောင် ပေါက်ကွဲေ နမယ့်အစား မိမိကိုယ်ကို ဖြေသိမ့်နိုင်သူများဖြစ်ပါတယ်။
မိန်းမအ များစုဟာ အတင်းပြောေ လ့ရှိကြပေမယ့် မိန်းမမြတ်တွေ ကတော့ အတင်းမပြောပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူတစ်ပါးမကောင်းကြောင်း အတင်းပြောတယ် ဆိုတာဟာ အချိန်ဖြုန်းခြင်း တစ်မျိုးလို့ ခံယူထားတဲ့ အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။
၄။ ရိုးရှင်းစွာ အသက်ရှင်တယ်။
ဆန့်ကျင်ဘက် လိင်တွေက ကိုယ့်ကို စိတ်ဝင်စားတာကို မိန်းမအများစုခံချင်ကြပေမယ့် မိန်းမမြတ်တွေ ကတော့ ဘဝကို ရိုးရှင်းစွာ ဖြတ်သန်းလိုကြပါတယ်။ သူတစ်ပါး စိတ်ဝင်စားအောင် တမင်လုပ်ကိုင်ခြင်း ၊ အမူအရာပြခြင်းတွေ လုံးဝမလုပ်ကြပါဘူး။
၅။ အိမ်ထောင်ဖက် အပေါ်မှာလည်း သစ္စာရှိတယ်။
ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ မိန်းမတွေ အများကြီးရှိပေမယ့် မိန်းမမြတ်တွေကတော့ ကိုယ့်ချစ်သူ ၊ ကိုယ့်ခင်ပွန်းအတွက် ရိုးမြေကျပေါင်းသင်းရအောင် အမြဲတမ်းသစ္စာစောင့်သိကြသူများဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကြင်ဖော် တစ်ယောက်တည်းကိုသာ စွဲစွဲမြဲမြဲချစ်ပြီး သစ္စာခိုင်မြဲရွှေလ က်တွဲလိုကြပါတယ်။
၆။ ကိုယ်ပိုင်ဝါသနာ ၊ ခံယူချက်ရှိတယ်။
မိန်းမမြတ်တွေဆိုတာ ကိုယ်ပိုင်ဝါသနာကို လက်တွေ့ကြအောင် အကော င်အထည်ဖော်တတ်ကြပြီး ကိုယ့်ဒဿနနှင့် ကိုယ်တိုင်အသက်မွေးကြသူများဖြစ်ပါတယ်။ လောကကြီးအတွက် ရိုးရှင်းစွာဖြတ်သန်းကြပြီး ဆန်းပြားစွာ တွေးခေါ်ကြ သူများဖြစ်ပါတယ်။
၇။ အသိတရား မြင့်မားတယ်။
အသိတရားမြ င့်မားတယ်ဆိုတာ ဘာသာရပ်တစ် ခုကို အလွယ်တကူ တတ်မြောက်နိုင်တဲ့ အစွမ်းသတ္တိဖြစ်တဲ့ ဉာဏ်ကောင်းခြင်းကို ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ မိန်းမမြတ်ဆိုတာ အကြောင်းအ ကျိုး ၊ အကောင်း အဆိုးကို ပြတ်ပြတ်သားသား ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ အသိတရားမျိုး ပိုင်ဆိုင်ထားကြပါတယ်။
ပြုံးရွှင်နေတဲ့ မျက်နှာထားဟာ မြင်ရသူ အပေါင်းကို စိတ်ကြည်နူးစေပါတယ်။ မိန်းမမြတ်တွေဟာ သူတို့ရဲ့မျက်နှာအနေအ ထားဟာလည်းကြည်လ င်ချိုသာပါတယ်။ စူပုတ်နေတဲ့ မျက်နှာထားကို ဘယ်တော့မှ ဖော်ပြလေ့မရှိဘဲ အမြဲတမ်းပြုံးရွှင်ေ နလေ့ရှိပါတယ်။
မိန်းမမြတ်ေ တွဆိုတာ လူတိုင်းနှင့်အလိုက် သင့် ပေါင်းသင်းတတ်ပါတယ်။ လူမုန်းမများစေဘဲ လူတိုင်းနှင့်တည့်အောင် ပေါင်းသင်းတတ်တဲ့ အသိတရားလည်း လက်ကိုင်ထား တဲ့အတွက်ဆက် ဆံရေးပါရဂူများဖြစ်ြ ပန်ပါတယ်။
Previous post သဈလုံးကို ကုဗပတှကျနညျး….သဈတနျတှကျနညျး….သဈ ၁ တနျ ဈေးနှုနျးတှကျနညျး….
Next post မွနျမာ့သမိုငျးထဲက ထမနျ (သို့) သမနျးကြား(Burma Tiger-Man)